ဆန်လီဟီ ကို မျှော်လင့်တကြီး ခန့်အပ်ပြီးမှ ဘာလို့ လမ်းခွဲလိုက်တာလဲ အာဆင်နယ်? - SPORTS MYANMAR
ဆန်လီဟီ ကို မျှော်လင့်တကြီး ခန့်အပ်ပြီးမှ ဘာလို့ လမ်းခွဲလိုက်တာလဲ အာဆင်နယ်?
ဖာဂူဆန် ခေတ်အလွန် နောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် က ရုန်းကန်မှုပေါင်းများစွာနဲ့ ဖြတ်သန်းလိုက်ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို အာဆင်နယ် အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေ က ကောင်းကောင်း သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။
သက်တော်ရှည် နည်းပြတစ်ဦး ထွက်ခွာသွားချိန်မှာ ၊ သူ့ရဲ့ နေရာကို အစားထိုးဖို့က ရုတ်တရက် မလွယ်သလို ၊ အသင်းရဲ့ လည်ပတ်ပုံတွေကလဲ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်ဖို့ အတွက်က အရမ်းကို ခဲယဉ်းပါတယ်။
ဒါကြောင့်လဲ အာဆင်နယ်ဟာ အာဆင်းဝင်းဂါး ခေတ်အလွန်မှာ ဘယ်လို ပုံစံမျိုးတွေ နဲ့ ရှေ့ဆက်ကြမလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို အသင်းပိုင်ရှင်တွေ အကြားမှာ စဉ်းစား အဖြေရှာနေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ အဘ နဲ့ လမ်းမခွဲခင် ကတည်းက ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ပုံကို အပြောင်းအလဲ လုပ်မယ်လို့ တရားဝင် ကြေငြာခဲ့သလို ၊ အဲဒီ စီမံကိန်းတွေကို ဦးစီး အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အတွက် ဘာစီလိုနာ ဒါရိုတ်တာဟောင်း ဆန်လီဟီ ကို အသင်းဆီ ခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။
ဆန်လီဟီ ဟာ အားကစား စီးပွားရေး အကြောင်းကို ထဲထဲဝင်ဝင် နားလည် သဘောပေါက်သူလို့ သတင်းကြီးပြီး ၊ Nike နဲ့ အတူ စျေးကွက် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှုတွေကို အောင်မြင်အောင် စွမ်းဆောင်ပြခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အသင်းရဲ့ အမှုဆောင်ချုပ် ဂါဇီဒစ် က သူ့ကို ယုံယုံကြည်ကြည် နဲ့ ကမ်းလှမ်းလိုက်ပြီး ၊ အာဆင်ဝင်းဂါး ခေတ်အလွန် မှာ ကလပ်အသင်း ကို ပုံဖော် တည်ဆောက်ဖို့ အတွက် တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဒေါ့မွန် ရဲ့သိမ်းငှက်မျက်လုံး လို့ တင်စားထားတဲ့ မစ်လင်တက် ကိုပါ ကင်းထောက် အကြီးအကဲ ရာထူးနဲ့ ဆက်လက် ခန့်အပ်ခဲ့တာပါ။
ထူးခြားတာ က အသင်းနဲ့ အတူ ရေရှည် လက်တွဲမယ်လို့ ယူဆထားတဲ့ ဂါဇီဒစ် ကိုယ်တိုင် အာဆင်နယ် နဲ့ မမျှော်လင့်ပဲ လမ်းခွဲသွားပြီး အေစီမီလန် အသင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်ဆိုရင် သူ့စိတ်ကြိုက် ထိပ်တန်း ၀န်ထမ်းတွေ ကိုတောင် ခေါ်ယူ ခန့်အပ်ထားပြီ ဖြစ်လို့ သူဟာ အာဆင်နယ် ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ထင်ထားခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပြင် အေစီမီလန် ဟာ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်းတွေ နဲ့ ရုန်းထနေရတဲ့ ကလပ် ဖြစ်လို့ ၊ အာဆင်နယ် ကို လမ်းခွဲပြီး အီတလီ ကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် က တော်တော်လေး ထူးဆန်းပါတယ်။
(အသင်းပိုင်ရှင်တွေ နဲ့ သဘောထားများ မတိုက်ဆိုင်ခဲ့လို့လား ….မပြောတတ်ပါဘူး)
ဂါဇီဒစ် ထွက်သွားသည့် တစ်ပြိုင်နက် ခရွန်ကီ ဟာ အသင်းကို ဦးဆောင်ဖို့ အတွက် ခေါင်းဆောင် နှစ်ယောက် ကို တစ်ပြိုင်နက် တာဝန်တွေ နှင်းအပ်လိုက်ပါတယ် ။ ဘဏ္ဍာရေး အကြီးအကဲ ဖြစ်သူ ဗီနိုင်း က စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကို ကိုင်တွယ်ရမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ ဆန်လီဟီ ကတော့ အားကစား ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကို တာဝန်ယူရမှာပါ။
သူတို့ နှစ်ယောက် ရဲ့ ဦးဆောင်မှု နဲ့ အတူ အာဆင်နယ် ဟာ စာမျက်နှာသစ် တစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
ဘောလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အားလုံးကို ဆန်လီဟီ ရဲ့ လက်ထဲကို ထိုးအပ်လိုက်တဲ့ တစ်ပြိုင်နက်ထဲမှာပဲ ၊ မစ်စ်လင်တက် နဲ့ သူ့ရဲ့ အဖွဲ့ဟာ အာဆင်နယ် နဲ့ လမ်းခွဲတော့မယ့် အကြောင်း သတင်းတွေ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ အချိန် ကတည်းက အာဆင်နယ် ရဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ဆိုင်ရာ အာဏာ လွန်ဆွဲမှုတွေ ရှိနေပြီလို့ စတင် သတိထားမိခဲ့တာပါ။
ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်း အတွင်းကလဲ စုစုပေါင်း ၀န်ထမ်း အရေအတွက် 10% ကို လျှော့ချလိုက်ရတာကြောင့် အာဆင်နယ် ရဲ့ ပုံရိပ်ဟာ ပရိသတ်တွေ အကြားမှာ တေ်ာတော်လေး ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ် အသင်းငယ်လေးတွေတောင် ဒီအကျပ်အတည်းကို တောင့်ခံနိုင်ပေမယ့် ၊ အာဆင်နယ် က ဘာလို့ တောင့်မခံနိုင်တာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သလို ၊ အလုပ်ဖြုတ်လိုက်တဲ့ အထဲမှာလဲ နာမည်ကြီး ကင်းထောက်တွေပါ ပါ၀င်ခဲ့တာကြောင့် သံသယ ဖြစ်စရာတွေ များခဲ့ပါတယ်။
မနေ့ကတော့ အာဆင်နယ် ဟာ ကလပ်အသင်းပိုင်းမှာပဲ စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတစ်ရပ် ထွက်လာပါတယ်။ ဒီစုံစမ်း စစ်ဆေးမှုဟာ ပီပီ ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ နဲ့ ပတ်သက်နေတာပါ။
ကလပ် စံချိန်တင် ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေးလိုက်ရတဲ့ ပီပီ ရဲ့ ခြေစွမ်းကို လက်ရှိ ကလပ်အသင်း မှာ ရှိတဲ့ သူတွေ အားလုံးက နှစ်သက်ကြပေမယ့် ၊ ဘာဖြစ်လို့ စျေးက အဲဒီလောက်အထိ ကြီးသွားတာလဲ ဆိုတဲ့ သံသယ အပေါ်မှာ ပြန်လည် စစ်ဆေး အဖြေရှာခဲ့တာလို့ နီးစပ်သူ တစ်ချို့ ပြောပါတယ်။
အဲဒီနောက် ကင်းထောက်တွေ ရဲ့ ပီပီ နဲ့ပတ်သက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို စစ်ဆေးသလို ၊ အပြောင်းအရွှေ့ လုပ်ဆောင်ရာမှာ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေ လုပ်ခဲ့ကြတာလဲ ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုပါ အသေးစိတ် စစ်ဆေးခဲ့တာပါ။
ဒီကနေ့မှာတော့ ဆန်လီဟီ နဲ့ လမ်းခွဲလိုက်ပြီ ဆိုတဲ့သတင်းက ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
အူနိုင်း အမ်မရီ ကို နည်းပြသစ် ခန့်အပ်ခဲ့တာလဲ ဆန်လီဟီ ရဲ့ ထောက်ခံမှု နဲ့ ဖြစ်သလို ၊ (အဒူး မရောက်လာခင်) သူ့ရဲ့ လက်ထက် ကစားသမားသစ် ခေါ်ယူမှုတွေကလဲ တစ်ခုမှ မှန်မှန်ကန်ကန် မရှိခဲ့ဘူးလို့ အကြမ်းဖျင်းပြောရမှာပါ။
အနှစ်ချုပ် သုံးသပ်ရရင် အသင်းပိုင်ရှင်တွေ ဟာ ဆန်လီဟီ ရဲ့ လုပ်ရပ် အမှားတွေကြောင့် အခုလို အကျပ်အတည်း တစ်ခုတည်းကို ရောက်သွားတယ်လို့ ယူဆနေပြီး ၊ အပြောင်းအရွှေ့ လုပ်ဆောင်တဲ့ အပိုင်းတွေမှာလဲ စိတ်ကျေနပ်မှု မရှိလို့ အခုလို ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၀မ်းနည်း စရာ ကောင်းတာ တစ်ခုက အာဆင်နယ် ရဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့လို နေရာမျိုးဟာ အာဆင်ဝင်းဂါးကြီး ထွက်ခွာပြီး နောက်ပိုင်း ဘယ်သူမှ အာဏာတည်မြဲမှု မရှိသလို ၊ အဝင်အထွက်တွေလဲ များလို့နေပါတယ်။
ဗီနိုင်းဟာ ဘဏ္ဍာရေး သမားစစ်စစ်မို့ ၊ အသင်းရဲ့ ကိစ္စအားလုံးကို ဖိဖိစီးစီး နဲ့ လည်ပတ်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတာ မသေချာသေးပါဘူး။
ဒါကြောင့် အာဆင်ဝင်းဂါး ကြီးများ အသင်းဆီ ပြန်ရောက်လာနိုင်မလား လို့တော့ မျှော်လင့်မိတယ်ဗျာ………